MyanCare | ကလေးတွေကို ကတုံးရိတ်သင့်သလား ??
ကလေးတွေကို ကတုံးရိတ်သင့်သလား ??
ကလေးတွေကို ကတုံးရိတ်သင့်သလား ??
ဖေဖေမေမေတို့ အများစု မှတ်ထင်နေတာ ကလေးကို ကတုံးတုံးရင် နောက်ထွက်တဲ့ ဆံပင်က ပိုထူ၊ ပိုသန်၊ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း ကလေးတွေကို ကတုံးတုံးတတ်ကြပါတယ်။ မွေးကစအရွယ် ကလေးတွေကို ကတုံးတုံးသင့်သလားဆိုရင် ??
အဖြေက “No, မတုံးသင့်ပါဘူး”
ကလေးကို ကလေးအသက် တစ်နှစ်လောက်အထိ ဆံပင်က အရမ်းကြီး ပွထ မနေဘူးဆိုရင် ညှပ်တာတို့ ကတုံးတုံးတာတို့ လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ လုပ်လည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဆံပင်ဆိုတာ အပူအအေး ဒဏ်ကို ဦးခေါင်းက ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြားခံ သဘောမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်။ ကလေးကို ကတုံးတုံးလိုက်လို့ ဆံပင်မရှိတဲ့အခါ ဦးခေါင်းက ပူလွယ်၊ အေးလွယ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ကလေးက အလွယ်တကူ အအေးပတ်တာ မျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဖေဖေမေမေတို့ မှတ်ထားသလို ကတုံးတုံးရင်ရော နောက်ထွက်တဲ့ ဆံပင်က ပိုထူ၊ ပိုသန်၊ ပိုကောင်းမှာလား ??
အဖြေက “ No ပါပဲ။ နောက်ထွက်တဲ့ ဆံပင်က ဒီတိုင်းပါပဲ”
ကလေးကို ဆံပင် သန်အောင်၊ ထူအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လသားကလေးလေးတွေ ဆံပင်မရှိဘဲ ကတုံးလုံးတုံးလေးတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကလေးတွေမှာ မွေးလာကတည်းက ဆံပင်မွှေးရင်းအမြစ် က မျိုးရိုးဗီဇအရ များတာ ရှိမယ်၊ နည်းတာရှိမယ်။
ကတုံးတုံးလိုက်တာဟာ ဆံပင်မွှေးရင်းအမြစ်ကို ဘာမှ သက်ရောက်တာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် နောက် ထပ်ထွက်လာမယ့် ဆံပင်ကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ပိုထူ၊ ပိုသန်လာတယ်ထင်တယ်ဆိုတာ စိတ်ထင်တာတစ်ခုပါပဲ။
ကလေးတွေကို ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ဆံပင်ညှပ်မလဲ? ကတုံးတုံးမလဲ?
တကယ်လို့ ကလေးကို ကတုံးတုံးဖို့ အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုရင် ကလေး ဘယ်အရွယ်မှာ ကတုံးတုံးရမလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကလေးတွေဆိုတာ အငြိမ်နေတတ်တဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ကလေးဦးခေါင်းခွံ မာပြီးတဲ့ အထိ စောင့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ခုခု ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင်ပါ။ ကလေးက ငြိမ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ တချို့တွေက အစောဆုံး အနေနဲ့ မွေးပြီး ခုနစ်လ လောက်ဆို ကတုံးတုံးတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေး အသက် တစ်နှစ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်နှစ်လောက်မှ ဆံပင်ညှပ်တာတို့ ကတုံးတုံးတာတို့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကလေးစိတ်ကြည်သာတဲ့အချိန်ကိုရွေးပါ။ များသောအားဖြင့် နေ့အချိန်ဆို သိပ်ဂျီမတိုက်တတ်ပါဘူး။
ကလေးထိုင်ရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ပါစေ။ ဒါမှမဟုတ် သက်သက်သာသာ လှဲနေပါစေ။ မချုပ်ထားပါနဲ့။
ဘေးမှာ သူဆော့နေကျ အရုပ်တွေ ကစားစရာတွေကို အာရုံပြောင်းဖို့ ထားပေးထားပါ။ သီချင်းဆိုတာဖြစ်ဖြစ် စကားပြောနေတာဖြစ်ဖြစ် အာရုံပြောင်းထားပေးပါ။ ကလေးကို နို့တိုက် နေရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။
ကလေးဆံပင်က အရမ်းရှည်နေရင် တိုအောင် အရင်ညှပ်ပါ။ ပြီးမှ ကတုံးတုံးပါ။
ကလေးဆံပင်ကို Shampoo နည်းနည်းပွတ်ထားရင် ကတုံးတုံးရတာပိုလွယ်ပြီး မြန်ပါတယ်။
ဘလိတ်ဓားကို သုံးတဲ့အခါ ကလေး ဦးရေပြားမထိဖို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ကတုံးတုံးတဲ့အခါ ကလေးမျက်နှာပေါ်ကို ဆံပင်တွေ မကျအောင် ဖယ်,ဖယ်ပေးပါ။
ကတုံးတုံးပြီးတဲ့အခါ ကလေးကိုယ်ပေါ်မှာ ဆံပင်တွေ မကျန်အောင် ရေနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပေးပါ။
ကတုံးတုံးပြီးတဲ့အခါ ကလေးခေါင်းကို ဘာလိမ်းပေးမလဲ ??
ကလေးကို ကတုံးတုံး၊ ရေနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ ခေါင်းကို ပိုးသတ်ဆေးရည်လေးနဲ့ နည်းနည်း သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ သာမာန်မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတဲ့ ဘလိတ်ဓား ဒဏ်ရာသေးသေးလေးတွေ ပိုးမဝင်အောင်ပါ။
နောက်ပြီးမှ ခေါင်းက ခြောက်သွေ့မနေအောင် moisturizer ဖြစ်ဖြစ် Baby Oil ဖြစ်ဖြစ် လိမ်းထားသင့်ပါတယ်။